3 Talaabada inuu ka soo kabsado File Overwritten ka Mac
1 Sidee inuu ka soo kabsado Overwritten Faylal ay ku Mac?
Hi ... aan la taliyaha u yimaadaan si ay dib-u-soo dajiyo faylasha qaar ka mid ah maanta. Nasiib darro, iyadu overwrote file ah oo la file cusub oo magac la mid ah. Hadda waxaan nahay baxay maalmo shaqo yar. Ma jiraa hab kasta oo suurto gal ah in halkaas soo kaban karto, file ah overwritten ka Mac?
Haddii aad hayo nuqul raad raac ah oo aad Mac overwritten ka hor, waxaad isticmaali kartaa Wakhtiga Machine si ay u soo ceshano. Haddii aad nasiib lahayn, waxaad weli uma baahna in ay isku dhibin. The files overwritten ayaa weli ku jira gudaha Mac. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in aad joojiso qaadashada Mac iyo raadiyo barnaamijka xogta Mac ah si ay kuu caawiyaan.
Halkan waxa aad ka qaadan kartaa Wondershare Data Recovery for Mac sida isku day ah. Tani software kabashada Mac Data waa awoodaa inuu ka soo kabsado noocyo kala duwan oo files aad Mac, iyadoo aan loo eegayn files yihiin overwritten aad Mac ama camera digital, disk adag dibadda, kaararka xusuusta, iwm Barnaamijkan ayaa sidoo kale waxay bixisaa version Fidmo idiintahay in baarista Mac ama qalab aad u overwritten ka hor inta aanad bixin, waayo, soo kabashada.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamadda hadda.
2 Ladnaansho File Overwritten ka Mac 3 Talaabooyinka.
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan oo kaliya taageeraa kabashada Mac. Dadka isticmaala Windows waa download Wondershare Data Recovery for Windows inuu ka soo kabsado file overwritten ka computer Windows.
Tallaabada 1 ka dib rakibidda iyo ordaya Wondershare Data Recovery for Mac aad Mac. Waxaad arki doontaa wax daaqad oo bixiya 3 hababka soo kabashada. Si aad u soo kabsado file overwritten, fadlan dooro "lumay Recovery File" mode.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado file overwritten ka qalab lagu kaydiyo dibadda, fadlan hubso in aad qalab lagu kaydiyo dibadda waxaa laga garan karaa sida drive adag on your Mac sameeyo.
Tallaabada 2 Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive saxda ah way adag tahay in laga baarayo faylka overwritten. Waxa kale oo aad kala miiri karaa natiijada iskaanka khaanadda "Nooca File Dooro" ka.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad "Enable Deep Scan" kartaa natiijo iskaanka fiican aad.
Tallaabada 3 scan ka dib, dhammaan faylasha helo waa la qori doonaa bidix ee daaqadda. Waxaad ku hubin kartaa in laga helo files yihiin waxa aad rabto in aad dib u soo ceshano ama aan magacyadooda la file.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad doonaysid in aad soo celiyo oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya, si aad Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo file ka soo kabsaday meesha uu asal ah, maxaa yeelay taasi waxay keeni lahayd in ay xogta overwritten arrinta.
> Resource > Mac > Mac Overwritten File Recovery: 3 Talaabada inuu ka soo kabsado File Overwritten ka Mac